DAAWO VIDEO: Feysal Waraabe ”Muuse Biixi dib u baryi meyno, waayo Aabahay madax kama dhunkan, balse Biixi waan ka dhunkaday”! | HalQaran.com
Hargeysa (Halqaran.com) – Feysal Cali Waraabe, guddoomiyaha Xisbiga UCID ayaa mar qura ka dhawaajiyay, in uu madaxa ka dhunkaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, isagoona ka baryaayay xalka arrimaha siyaasaddeed ee Somaliland ka taagan.
Guddoomiye Feysal Cali Waraabe ayaa xusay, in aanu xitaa Aabihii dhalay weligii ka dhunkan madaxa, sida uu yiri.
Wuxuu kaloo sheegay, in madaxwayne Muuse Biixi ay ka soo Hartay Madax adayg, isagoona wacad ku maray inaysan mar dambe Baryi doonin Muuse Biixi.
Sidoo kale, guddoomiye Feysal Cali Waraabe ayaa si adag uga hadlay Xaaladda adag ee iminka ka taagan Somaliland, isagoona ula jeeday jabhadaha gobolka ka dillaacay.
“Doorasho iyo Nabad gelyo ayaynu ku Faani jirnay, Nabadii Faraha ayay ka sii baxaysaa Jabhado ayaa Jira, Sidoo kale doorasho ma muuqato, Muuse Biixi Somaliland wuxuu ka dhigay dukaan uu lahaa oo uu Ka Maqnaa oo uu dib u helay, waxa soconaysa oo dadka Somaliland yeeli doono maaha.” ayuu yiri guddoomiye Feysal Cali Waraabe.
TOP NEWS: Ninkii qaraxa ku xiray gaarigii ZOOBE ku qarxay oo ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay
UPDATE: JUBBALAND oo u hanjabtay mas’uuliyiinta maamulada degmooyinka ‘‘Ciddii DF Somaliya la shaqeysa tallaabo adag baan ka qaadeynaa‘‘!
ARAG SAWIRKA: NISA oo Caawa soo bandhigtay ninkii ka dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay Isgoyska Zoobe
DEG DEG: Qarax khasaare geystay oo goor-dhow ka dhacay Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo si adag u beenisay in cudurro laga helay Galeyda iyo Masagada ee dalka + ( AKHRI WAR-SAXAAFADEED-KA)
dib u baryi meyno Biixi
Feysal Cali Waraabe oo sheegay inuu madaxa ka dhunkaday Muuse Biixi
Somaliland qatar bay ku jirtaa